जब रबिन्द्र मिश्रका छोराले फोन गरेर भने बाबा मैले अमेरिकामा चुनाब जिते…. || सुनौलो नेपाल
जब रबिन्द्र मिश्रका छोराले फोन गरेर भने बाबा मैले अमेरिकामा चुनाब जिते….
सोमवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै छोराले विश्वविद्यालयको ‘स्टुडेन्ट गभरमेन्ट काउन्सिल’को नेतृत्व गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।अगाडि उनले भनेका छन्, ‘मैले चुनाव हारेँको थिएँ । मेरो छोराले जितेछ । मेरा छोराजस्ता दशौँ हजार क्षमतावान नेपाली विद्यार्थी विदेशमा छन् । यो देश हाम्रो पुस्ताले बनाउन सकेन भने तीमध्ये अधिकांश नेपाल फर्किँदैनन् । दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा बस्ने वातावरण नै नबनाई देश कसरी बनाउने ? मेरो छोराका उमेरका दशौँ लाखौँ युवाहरूलाई नेपाल फर्किने र नेपालमैं बस्ने वातावरण सृजना गर्न लागि परेको छु । नयाँ वर्षले सोही दृढतामा थप शक्ति प्रदान गरोस् !’
यस्ताे छ मिश्रकाे फेसबुक स्टाटस:
बाबा, मैले चुनाव जितेँ
मैले चुनाव हारेँको थिएँ। मेरो छोराले जितेछ।
Forbes Magazine का अनुसार Bowdoin अमेरिकाको तेस्रो उत्कृष्ट Liberal Arts कलेज हो। A Levels को परिक्षामा उत्कृष्ट (एउटा विषयमा विश्वमैँ उत्कृष्ट) नतिजा लेराएपछि उसले Bowdoin College मा राम्रो छात्रवृत्ति पाएको थियो।
सोम, बैशाख २, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
एकैपटक यति धेरै न्यायधिसको सरुवा, को कहाँ पुगे (सुचीसहित)
लन्डनका बसमा नेपालका कला संस्कृतिको प्रचार